FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BOXACHI - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Boxachi
Alika mifangaro mpiady totohondry / Chihuahua
Luna the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika karazany amin'ny 8 volana milanja 10 pounds
Ny alika Boxachi dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Chihuahua ary ny mpanao ady totohondry . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua alika hybrid amin'ny 4 taona— 'Tawny dia natsangana tamin'ny hopitaly famonjena biby any Gainesville, Florida. Nolazaina tamiko fa ny rainy dia mpanao ady totohondry ary ny reniny a Chihuahua ary ny reniny dia tsy tafavoaka velona tamin'ny nahaterahan'ny zanany tokana. '
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua alika hybrida amin'ny 5 taona— 'Tia olona i Tawny, indrindra ny ankizy. Tiany ny maka sy manenjika baolina sy kilalao. Tiany ny manenjika kitrotro manodidina ny vatan-kazo. Fantany ny mamela irery ny bibilava. '
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika karazany amin'ny 3 taona
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika toy ny alika kely 15 herinandro
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika alika toy ny alika kely 13 herinandro
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika alika toy ny alika kely 12 herinandro
Tawny the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro ny alika kely toy ny alika kely 10 herinandro— 'Hitanao ny antony tsy maintsy namonjeko azy.'
Luna the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro ny alika kely amin'ny 8 volana milanja 10 pounds miaraka amin'ilay sakaizany lehibe kokoa.
Luna the mpanao ady totohondry / Chihuahua afangaro alika toy ny alika kely
st Bernard volamena retriever mifangaro alika kely amidy
ohatrinona ny kisoa voatavo vilany
labrador afangaro amin'ny alika kely chihuahua